Tadiom-pitiavana | 2
- " Mahefa, fa maninona anie ianao no tsy nisisika nitady ahy fa dia navelanao tany fotsiny aho rehefa tsy niantso anao intsony eh" hoy i Mihary tamin'ny feo miangoty sady mitana ny vera misy ranomboakazo vao nampidinin'i Mahefa ho azy.
Tsy tonga dia namaly avy hatrany anefa ny anao lahy fa somary naka saina kely aloha sady mody sondriana nampidina rano mangatsiaka hosotroiny ihany koa. Namindra moramora nanatona teo akaikin'i Mihary izay nipetraka teo ambony seza lava izy nony avy eo sady namaly hoe:
- " An, an, an, ry Mihary a! aza alefa amin'izany intsony aloha ny sainao, ianao eto anilako no eritrereto, sa tsy tinao ho tanterahina amin'izay ireny vetsovetsom-ponao taloha ireny?" sady namonjy nipetraka teo akaikin'ity tovovavy toa manara-maso tsara ny fihetsiny iray manontolo i Mahefa.
- " Tena azonao antoka ve ry Mahefa fa mbola tia ahy ianao?" hoy ihany i Mihary tsy sahy tena nijery tsara an'i Mahefa.
- " Raha nisalasala aho ry Mihary dia tsy toy ireny zava-nitranga teny amin'ny seranam-piaramanidina tamin'ny fotoana nahitako anao teo ireny ny fihetsiko."
- " Mba maka toky fotsiny aho kah" hoy i Mihary nitsiky sady nahankiny moramora teo antsorok'i Mahefa ny lohany.
Tsy naharitra ity farany fa avy hatrany dia nanainga moramora ny tanany hanafosafo ny volo lavan'ity tovovavy henim-pahasambarana tamin'ny fotoana tsy nampoiziny. Nangina tsy nisy niteny aloha izy roa fa ny feon'ny vata fampangatsiahana tao andakozia no sisa feo heno. Toa samy lasa fisainana tamin'ity fihodinan'ny fiainany tampoka teo. Tsy fantatry Mihary ny mety ho tohin'ny fiainany rahampitso fa ny zavatra tsapany tamin'izay fotoana izay dia tsy nisy afatsy fahatoniana tanteraka. Adinony tanteraka ny momba an'i Hery sy ny tebitebiny amin'ny hahitany an'i Alexia. Tsy nanampotoana handinihina ny fihaonan'i Hery sy Alexia izy raha ny tena marina. Raha mbola varimbariana teo izy no injay henony misy hafanana manalokaloka ny tarehiny. Nakariny ny masony ary io tsinjony fa efa antomotra dia antomotra azy ny molotry Mahefa. Toa azom-panafody ny fahatsapany ny tenany. Nalemy izy ary tsy nanana hery hanoherana intsony fa dia namela an'ity lehilahy hanaram-po teo amin'ny molony teo. Nankimpiny ny masony. Tany Mahajanga no nahatsapany farany ny tsiron'izany oroka izany. Tsy te hieritreritra an'izany anefa izy fa fitiavana vaovao feno fanantenana no tiany hameno ny fiainany. Raha mbola variana naka fahafinaretana tamin'ny orokorok'i Mahefa teo izy no Injay henony nivadika moramora tao andamosiny ny tanan'i Mahefa sady nanomboka nanafosafo malefaka ny tenany. Niakatra tanteraka ny filana tao anatin'i Mihary. Tsy tiany hifarana intsony izao zavatra tsapany izao fa satriny hitohy foana. Nihilana moramora izy hidaboka teo amin'ilay seza lava vita amin'ny hoditra sady nosintoniny hanaraka azy teo amboniny i Mahefa. Tsy nanohitra na dia kely akory aza ny anao lahy fa dia nanaraka izay nitondran'i Mihary azy. Nosokafany kely ny masony sady nitsiky tamin'i Mahefa izy.
- "Vahao ny bokotr'ity lobako ity" hoy izy tamin'ity farany tamin'ny fihetsika toa sahisahy. Ny nahazoan'i Mahefa ny baiko no ela fa indro izy nanokatra nibanabana ny tratran'ity tovovavy sady nampiharihary ireo nono be mirongaronga mbola voasarona taty nono tao anatiny. Saika ndeha hamaha ny hidin'ilay taty nono avy hatrany i Mahefa no nosakanan'i Mihary haingana.
- "Mbola tsy iny aloha Mahefa fa ity indray no manaraka" hoy izy sady notondroiny ny pataloha teny aminy. Vaovao tamin'i Mahefa ity fihetsiky Mihary mihasahy mitaky ny zavatra tadiaviny ity saingy tsy nampaninona azy fa vao maika aza toa nampiredareda ny filana niakatra tao anatiny. Ohatran'ny nanonofy indray i Mahefa nahita ny hasohan'ny vatan'ity tovovavy efa nambabo ny fony. Henony fa nihafaingana ny fisefoany ary nanomboka nihateritery ny pataloha teny aminy.
- " Ao sokafy amin'izay ity " hoy i mihary sady noraisiny ny tanan'i Mahefa hakeo amin'ny ilay hidin'ny taty nonony teo anoloana. Toa nijanona kely ny fahatsapan'i Mahefa ny fitempon'ny fony raha vao nahita ireo nono somary kelikely nefa tsara rafitra.
- " Io ho anao io!" hoy i Mihary " Anarano fo amin'izay itiavanao azy fa omeko anao ambongadiny"
Nitsiky heniky ny hasambarana ny vatan'i Mahefa. Nihodrika izy sady nampanantoniny moramora teo amin'ilay lohanon'i Mihary teo ankavanana ny molony. Ny tanany iray kosa amin'io nanafosafo ilay nono teo ankavia. notsetsafiny kely indray mandeha aloha sady narahiny kitikitika moramora tamin'ny lohalelany. Nikiaka i Mihary, tsy tanany fa nitroatra avokoa toy ireny nokakerin'ny herinaratra ireny ny tenany. Niverina nakeo indray anefa i Mahefa afaka segondra vitsy sady nitsentsitsetsitra toy ireny zaza kely menavava noana ny rononon-dreniny ireny. Tsy hitan'i Mihary intsony izay hasiany ny tenany. Lafatra loatra ny zavatra tsapany ka hany heriny dia nanakimpy ny masony hianoka izato fahasambarana manenika ny vatany.
Henony fa injay misy ranoka mirotsaka tsikelikely mamonto ny atin'ny fivaviany. Nohenjanin'i Mahefa indray ny lohalelany rehefa avy eo dia nakasokasony sady nahodinkodiny nanodidina ilay loha nonon'i Mihary efa nihenjana izay tsy izy. Nivadibadika ny mason'i Mihary. Toa te ho safotra izany ny fahatsapany ny tenany. Mbetika izy te hihiratra te hijery an'i Mahefa, mbetika izy te hikimpy tsy hihaino afatsy ny tsirony tsapany any anatiny any fotsiny.
- " Mahefa, tiako be izany ataonao izany!" hoy ilay tovovavy tsy naharitra intsony fa nilaza ny tao antsainy.
- " Tinao?" hoy i Mahefa somary mingonongonona sady manohy ny orokoroka sy ny tsetsitra nanerana ny nonon'i Mihary. Tsy nisy navelany ho afa maina fa noleladelafiny avokoa ny tratran'i Mihary iray manontolo. Nampidininy moramora tamin'izay ny tanany hanafosafo ny fen'ity tovovavy efa miha malemin'ny fahafinaretana sady zara raha hahasokatra ny masony hijery azy. Nampiakariny kely hanafosafo teo amin'ny andilan'i Mihary aloha ny tanany izay vao nafindrany teo atampon'ilay dongona mbola tsara fono tao anaty silipo manify mampiseho manjavozavo ireo volo kely ao ambaniny. Safosafo malefaka fotsiny aloha no nataony teo. Tampoka tamin'ny tsy nampoizin'i Mihary, Injay fa henony ny tanan'i Mahefa mivezivezy amin'ny halavan'ny molotry ny fivaviany. Lafatra loatra izy. Nosokafany hivelatra kokoa ny feny. Injay fa henon'i Mahefa miainga moramora ny maonjan'i Mihary toa te hanenjika mafy ny toerana andalovan'ny tanany. Novonjeny norohana haingana aloha ny molotr'i Mihary fa tsy tantiny ny nijery ny molony efa mivontovonton'ny hasambarana somary nisanasana toa tsy mahatsiaro tena. Nikiaka kely kely ny anao vavy isaky ny ampandalovin'i Mahefa eo amin'ny kitson'ity farany ny ratsantanany. Satrin'i Mihary hiditra lalina any anatiny any ny tanan'i Mahefa iray manontolo. Toa miha tsy tompon'ny tenany intsony no fahatsapany azy. Tosam-pahasambarana no henony mananika ny tenany.
Niakatra ihany koa ny filana tao anatin'i Mahefa fa toa tsy ampy azy intsony ny ratsantanana iray fa dia telo avy hatrany no naveziveziny nivoaka niditra tao anatin'ilay zohim-pahafinaretan'i Mihary izay hotsaky ny hamandoana tanteraka. Nanomboka nimonomonona ity tovovavy. Te hiezaka hahazo izay tian'ity farany ho lazaina i Mahefa nefa toa tsy foiny ny hanapaka ny zavatra iainan'izy roa. Voatery tsy maintsy niarina kely ihany anefa izy nony avy eo fa tsapany toa nanelingelina azy ilay silipo mbola teny amin'i Mihary. Nahisany haka sisiny tsara mba hampiseho ireo molotra hotsaky ny hamandoana dia iny izy niverina nanohy ny nataony teo aloha indray. Vetivety dia mamon'ny filana indray i Mihary. Nafindran'i Mahefa moramora hanafosafo ny kibo sy ny nonon'i Mihary tamin'izay ny tanany ankavanana rehefa avy eo. Ny tanany ankavia kosa mbola nanohy nanafosafo fivavian'i Mihary iray manontolo. Raha mbola sondriana teo izy no injay henony fa nangovingovitra sady toa manenjika mafy ny onjan'ny tanany ny maojan'ity tovovavy. Tsinjon'i Mahefa fa efa tsy ho ela dia ho tonga any amin'ny farantampom-pahasambaran'ny nofo ity olon-tiany ka dia notohizany hatrany ny safosafo sy ny horokoroka sady mijery tsara ny tarehin'i Mihary izy. Tamin'ny fotoana tsy nampoiziny no injay henony nitaraina toa te hitomany sady niantsoantso " Maaaaheeeefaaa!" i Mihary. Azon'i Mahefa avy hatrany ny zava-nitranga. Ranoka fotsifotsy madio tanteram-pahazavana no indro nifantsitsitra nivoaka ny fivavian'i Mihary. Nikoropaka haingana izy nitady izay azony sarangotina hamafana ity rano mitsonika tamin'ity malalany. Tampoka loatra ary tsy nampoiziny ilay fitrangany teo. Nitsangana haingana izy nony avy eo sady nihazakazaka nankany amin'ny efitrano fandroana naka izay servieta sendra azy. Nofafany aloha izay raraka tamin'ny seza izay vao namafa moramora izay ambiny tavela teo amin'ny fivavian'i Mihary izy. Niharina moramora i Mihary nony avy afaka kelikely sady menamenatra nitompy maso tany amin'i Mahefa.
- "Azafady aky Mahefa!" hoy ny voalohan-tenin'i Mihary. "Efa ela loatra aho no tsy nanao sady tiako be ny anaovanao ahy dia tsy tanako intsony fa tonga dia niakatra tany antampony mihitsy"
- " Mahalana be aho vao tena mamoaka rano ohatran'iny " hoy ihany i Mihary nanohy. " Tena nahazo fahafinaretana be aho mantsy"
- "Efa fantatro ny fisian'izy iny" hoy i Mahefa fa mbola tsy sendra fotsiny aho ka izay no nahataitra ahy teo... Hay ohatran'ireny mihitsy izy ity".
- " Dia ahoana izany zaho amin'izao?" hoy i Mahefa te hananihany an'i Mihary nony avy eo.
- " Ndao aloha ento mandro aho dia rehefa avy eo ianao mahazo ny anjaranao any ambony fandriana" hoy i Mihary.
- " Tsy avelako ho tonga vetivety ohatran'iny intsony ny anao rehefa avy eo" hoy i Mahefa fa maty antoka be aho raha izao no mitohy sady nobatainy hotrotroina i Mihary.
Tany antranon'i Malala, ny ampitso maraina.
Injay fa naneno ny telefona nihantona teo amin'ny rindrina:
- " Allo, Mme Malala ihany ity, Manahoana tompoko"
- " I Patrick zanaky ingany Ramanana ihay ity e, manao ahoana ianao madama?"
- " Manao ahoana ianao" hoy i Malala somary sadaikadaikatra sady nahatsiaro tampoka ny tarehan'ilay tovolahy.
- " Saika mba hitady an'ingahy Ratrema aho azafady fa misy fanontaniana mba manitikitika ahy mafy" hoy ny feon'i Patrick toa nanafosafo tao antsofin'i Malala.
- " Tena tara kely azy fotsiny ianao Mr Patrick, vao teo mihitsy izy no lasa, maninona raha antsoinao any ampiasany izy afaka antsasakadiny eo ho eo,...sao dia mba azoko valiana ihany anefa ny fanontanianao ...Sa?" hoy i Malala toa liana fatratra ny amin'ny antony niantson'ity tovolahy ny vadiny vao maraina.
Nangina kely aloha i Patrick izay vao nanohy indray sady nilaza tamin'i Malala hoe
- " Maninona raha manao fotoana miara misotro ranomboakazo isika rehefa avy eo dia any no miresaka sa tsy afaka ianao?"
Tsy nahateny aloha ny anao vavy. Toa tsy nampoiziny loatra ilay fivadihan'ny resaka teo ity. "Hafahafa ihany ny fijerin'ity Patrick ity ahy tamin'ny fotoana nihaonanay farany iny an" hoy izy anankampo "fantatro ny zavatra tiany hahatongavana fa aleo mody andehanako any ihany aloha handinihako izay tena paikany."
- " Efa eo ampihomanana ny handeha hivoaka mihitsy aho io fa aiza no fotoanantsika izany" hoy i Malala. " Tsy resaka lava anefa fa mila mandalo eny amin'ny trano Fitaratra eny Alarobia aho amin'ny atoandro"
- " Vetivety fotsiny kah" hoy i Patrick sady nanondro ny toerana hihaonany amin'i Malala teo izy.
Nony afaka antsasakadiny mahery,
Iny i Malala miakatra ilay tohatra kely miditra ao amin'ilay trano fialana hetaheta eo Ambohijatovo. Efa tonga mialoha kely noho izy teo anefa i Patrick na dia mbola tsy nivoaka tao anatin'ilay fiara maizim-pitaratra tanteraka aza. Nikoropaka nivoaka haingana ny tovolahy sady nanaraka avy ato aoriana nony avy eo. Raha eo ampiherikerehana teo i Malala no nifanojo ny mason'izy ireo. Nitsiky ny tovolahy ary dia namaly tamim-pitsikiana toa izany koa ny anao vavy.
- " Noheveriko fa diso ny toerana nandehanako" hoy i Malala nitari-dresaka.
- " Efa folo minitra izay no nahatongavako teto " hoy i Patrick fa te hahita ny fahatongavanao fotsiny aho dia izay no tsy niandrasako taty anatiny... mba afaka mandinindinika tsara ny hakanton'ny bika aman'endrikao mantsy aho amin'izay raha ny tena marina."
Tsy namaly i Malala fa tsiky miharo fangarihana no nasetriny ny tenin'i Patrick. "Ho hitanao tsara ny hahazo anao fa miadaladala amiko eo" hoy i Malala tany antsainy tany. Tery amin'ny latabatra nitokatokana somary takotakona ny daholo be tery izy roa no naroson'ilay tovovavy mpampandroso olona.
- " Ahoana, hiara hiasa ihany ve isika sa tsia?" hoy i Malala sahisahy nahita ny fihetsiketsik'ilay tovolahy taminy.
- " Ka ny amin'izay mihitsy anie no nitadiavako an'i Ratrema teo iny eh?"
- " Misy olana be angaha?" hoy i Malala somary taitaitra.
- " Eny eh! Misy sakana ihany ilay izy satria ilay rahalahiko tena tsy mazoto mihitsy, i Dada moa izany mihazohazo eo ampovoany eo fa miandry izay tena hevitro sisa"
- " Ary ahoana ny hevitrao? " hoy i Malala mody nitsiky te halalala fantatra izay ao andohan'i Patrick.
- " tena tinao ho fantatra ny hevitro?" hoy i Patrick sady nanatokatoka ny lohany no mibanjina tsara ny mason'i Malala
- " Izay mihitsy" hoy ity farany.
- " Sady te hanampy anareo aho no te hiaraka aminao koa"
- " Ahoana tsara hoe ry Patrick" hoy i Malala mody taitra tamin'ny zavaboalazan'ity farany.
- " zany e, te hiaraka aminao aho fa raha mazoto ianao dia alamiko ny lohan'izy mianaka"
Tsy niteny i Malala fa i Patrick izay nandray ny vera nisy ny ranom-boakazo teo anoloany no nodinihiny tsara.
- " Maninona ianao no tsy miteny " hoy i Patrick afaka segondra vitsy toa tsy naharitra an'i Malala mandinika mafy azy.
- " Mahalasa fisainana ahy izany zavatra lazainao izany ry Patrick" hoy izy. " Raha tsy hiaraka aminao aho izany dia tsy hanampy anay ianao?"
- " Ohatra ohatran'izay no mety ho fitrangany " hoy i Patrick mody tsy naka sarotra.
Nangina tsy niteny indray ny anao vavy. Lasa tany amin'i Ratrema sy ny zanany mianadahy ny sainy. Nalainy sary antsaina ny mety hanjo azy ireo raha tsy manaiky ny hiombon'antoka aminy ry Patrick mianankavy.
- " Ngaha moa ianao io tsy manambady?" hoy izy tamin'i Patrick nony avy eo niezaka ny ho tony.
- " Manambady aho fa manakana ahy tsy ho voasintona aminao angaha moa izany"
Ndeha ho faiziko ataoko mahalala tsara ahy ity bandy ity hoy i Malala anakampo fa ndeha aloha hakeko any izay zavatra tadiaviny.
- " Tena sur ianao fa te hiaraka amiko?" hoy i Malala .
- " Tsy isalasalako izany ry Malala a! vao nahita anao aho tamin'ilay fihaonantsika tany amin'ny biraon'i dada iny dia tena efa tapaka ny hevitro"
- " Tsy mora anie ny miaraka amiko" hoy i Malala " fa ampijalijaliako mihitsy eh"
- " Tsy olana izany fa rehefa manaiky fotsiny ianao dia omeko anao izay tadiavinao"
- " Ndao ary!" hoy i Malala sady nitsangana moramora izy rehefa avy nisotro ilay ambiny faraparany tao anatin'ny verany.
Nalohan'i Patrick ny vola dia indro izy nivoaka sady nanokatra ny fiarany hidiran'ny Malala.
- " Aterinao eto ihany aho rehefa avy eo? " hoy ny anao vavy. " Ny fiarako mantsy iry miantsona ery ambany iry!"
- " Midira haingana" hoy i Patrick "fa tsy olana izany sady nakatony ny varavarana."
- " Ho aiza isika izany?" hoy i Malala nitodika tany amin'i Patrick.
- " Efa misy toerana nantsoiko teo handray antsika"
- " Mila tonga any Alarobia alohan'ny amin'ny roambinifolo anie aho eh?"
- " Eny hoy aho," hoy i Patrick sady nosafoiny kely ny fen'i Malala ao anaty zipo.
Tsy niteny intsony i Malala fa ny mpandeha teny amin'ny arabe no nobanjininy mafy. Lasa ny fisainany mandinika izay ho mety ho tohin'izao fanapahan-kevitra noraisiny izao. Mbola hitohy.
Raha vao nigadona tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Charles de Gaules izy mianaka dia tsy andrin'i Alexia ery ny hijerena izay voalaza teo amin'ireo filazana ny fahatongavan'ny fiaramanidina. Henony fa nidobodoboka mafy ny fony raha vao nahita ny anaran'ny zotra Air Madagascar niseho teo.
- "Dada a! efa tonga hono ry zareo fa ndao haingana!" sady noraisiny ny tanan'i Mahefa hanaraka azy.
Tamin'izay fotoana izay indrindra koa anefa no naneno sady nihovitrovitra ny finday tao ampaosin'i Mahefa.
- " Izay angamba ry zareo!" hoy izy sady noraisiny haingana ilay antso.
- " Allo! ... Pr Mahefa!" hoy ilay feo izay tsy dia vaovao firy tamin'ny Mahefa intsony.
- " Dr Mihary, Tonga soa ianareo, aiza izao ianareo io?"
- " Efa tafavoaka ny fisavana pasipaoro izahay fa miandry anareo mianaka sisa" sady nohazavazavain'i Mihary ny toerana misy azy ireo.
- " Eny ary" hoy i Mahefa "efa tamy izahay fa aza mihetsiketsika eo izany " sady namindra maimaika ihany i Mahefa sy Alexia.
- " Tonga isika ity ry Hery ka ahoana ny fihetsem-ponao hahita an'i Alexia indray?" hoy i Mihary tamin'ity tovolahy namparary ny fony hatrizay. Tsapany fa mbola nitempo fitia hoan'i Hery ny fony na dia niezaka mafy ary izy nanao an'izao rehetra izao hampitoniany ny tenany. Anisan'ny vaha olana faran-tapony heveriny fa hanampy hahasitrana azy ity fanaterana an'i Hery hihaona amin'i Alexia ity. Mihevitra izy fa rehefa hitany fa olonkafa mihitsy no tian'i Hery dia hahay hampihonon-tena amin'izay ny fony. Raha mbola variana kely teo i Mihary no namaly ny fanontaniany i Hery izay hita efa tena tsindrindaona fatratra.
- " Efa tena tsy andriko mihitsy ry Mihary ah? hanao ahoana re ny fihetsiny mahita ahy eto ambonin'ity fandriana ity eh"
- " Aza be eritreritra ny amin'izany ianao ry Hery ah" hoy i Mihary " Rehefa tiany ianao dia tiany na ahoana na ahoana"
Tsy ela taorian'izay dia indro tokoa fa niditra ilay varavaram-pitaratra tsy lavitra teo i Alexia sy Pr Mahefa. Tsy tana fa dia nihazakazaka madinika mihitsy ny anao vavy namonjy teo amin'i Hery sady velon-tsiky tsy nisy ohatran'izany.
- " Hery ! Tonga soa. Hitako ihany ianao lahy nony farany! Ao ho rohako izany malalako izany" hoy i Alexia. Toa te handihindihy izany ny fahatsapany ny tenany noho ny hafaliana tsy omby tratra tsapany.
- " Alexia fitiavako!" hoy i Hery sady nanomboka nijohy mora ny ranomaso nanenika ny tavany. "Mbola tinao tokoa ve aho? ... Mifona aho fa tena tsapako mihitsy ireny fampijaliana anao nataoko ireny."
- " An, an, aza mitomany ohatran'io ianao fa tsy mety... Aleo aloha izany ho any fa tadidio fotsiny hoe tia anao aho ary tia dia tena tia, Izany an?" hoy i Alexia nanambitamby mafy ity olontiany izay saiky namoizany ny ainy. " tsy avelako handeha lavitra ahy intsony ianao" Hoy ihany izy sady nosafosafoiny moramora ny lohan'ity tovolahy toa nahatsiaro fahasambarana tonga eo anilan'ny tiany.
Samy tsy nisy nahaloam-peo na i Mahefa na i Mihary fa variana nijery ireto mpifankatia ela nifampiandrasana. Rehefa izay vao nanompy ny masony tany amin'i Mihary i Mahefa ary akory ny hagagany fa tsy iza akory ity olona manoloana azy ity fa i Ramisarivo ilay tovovavy nanaitaitra azy fahizay tany Etazonia. Nikoropaka ny anao lahy. Vahotra ny vavany. I Mihary koa moa tamin'io tsy naha hetsika tamin'ny toerana fa nijajirika toy ny labozia teo amin'izay nisy azy raha vao nahatsikaritra ny zava nitranga.
- " Tsy mampino!" hoy i Mahefa nony afaka kelikely rehefa avy nanagona ny heriny rehetra tao anatiny hiresahany tamin'ity tovovavy nambabo ny fony taona maromaro lasa izay.
- " Ianao marina ve io?" hoy Mihary namaly sady velon-tsiky toa tsy nino ihany koa sady nanatona moramora teo akaikin'i Mahefa. Nivadika ny fandehan'ny tantara fa nifantoka tany amin'ireto olon-dehibe indray ny mason'ireto zatovo mpifankatia. Tsy hay nafenina fa nisy hery nampifanintona azy roa ary dia nifamihina toa ireny mpifakatia ela tsy nihaonana ireny koa i Mahefa sy Mihary. Nitodika moramora tany amin'i Hery i Alexia te hanontany mafy hoe mifankahalala angaha ry zareo ireto. Na dia i Hery koa aza anefa dia tsy nanampo ny zava niseho ka dia nidanaka foana teo koa izy.
Tsy naharitra i Alexia nony farany ka nanontany mivantana andrainy.
- " Fantatr'i Dada angaha i Dokotera Mihary?" sady nangalam-pijery kely tany amin'i Mihary izy?
- " Fantatro dia fantatro tokoa izy anaka. Tany Etazonia no nihaonanay voalohany. Tantara lava fa aleo rehefa any antrano aho mitantara azy aminao fa ndao aloha handeha fa efa vonona ry zareo hitondra an'i Hery any amin'ny hopitaly"
- " Hay! Tsara kosa izany!" hoy i Alexia sady somary nitsiky kely tamin'i Mahefa izy.
- " Tsy maninona ve ry Dada raha izaho no miaraka amin'i Hery" hoy i Alexia nony avy eo.
- " Tsy misy olana mihitsy anaka fa any amin'ny hopitaly izany isika mihaona rehefa avy eo an."
- " Hitako ihany lahy ianao" hoy i Alexia mantsy ity malalany. " Nisy fotoana aho tena efa namoy fo mihitsy, fa tsy afeniko anao ry Hery"
- " Faly aho fa tsy nafoinao sady tsy natakalonao an'iza n'iza aho" hoy i Hery namaly moramora. " Izaho koa anie nijaly be tany eh. Mbola ho tantaraiko anao moa izay rehefa sitrana tsara aho. Tsy mety amiko mihitsy ny lavitra anao ka!" hoy i Hery sady nitodika moramora tany amin'ity tovovavy tsara tarehy teo anilany izy.
- " Raha hendry tsara amin'izay ianao dia tsy hiala eo akaikinao intsony aho" hoy Alexia tamin'ny feo miangoty feno hantahanta.
Nahatsiaro voatsindrona kely tao ampony i Hery naheno ny tenin'ity farany. Nitamberina tao antsainy ny adalany nifandimby hatrizay tany Madagasikara.
- " Tsapako mihitsy ny ditrako ry Alexia, ary manenina tongotra aman-tanana ny amin'izay vitako aho. Hiezaka aho ny hanonitra azy aminao ny amin'izao sisa izao!" hoy i Hery sady noezahany notakarina moramora ny tanan'i Alexia.
- " Efa tsara izay rehefa tsapanao ny lesoka mila harenina ka. Mamela anao aho " hoy i Alexia sady notsenainy ny tanan'i Hery dia nofihininy mafy.
- " Mba hendre tsara amin'izay moa e!" hoy ihany izy nanohy sady nitsiky malefaka nijery tany amin'i Hery.
- " Mahazo matoky ahy ianao ry Alexia" hoy i Hery nony avy eo "raha sitrana soamatsara eto aho dia ho hendry tanteraka sady hanao izay hahasambatra anao."
- " 'Zany? Tena ho hendry tsara amin'izay an? " hoy i Alexia sady nibitaky ny hafaliana tany anatiny tany. Efa ela no niandrasany teny mamy feno fampanantenana fiovana toy izany avy amin'ity olon-tiany ity mantsy.
Vao lasa ny fiara mpitondra marary nandehanan'i Hery sy Alexia dia indro i Mahefa nanao dia maika namoha ny varavaran'ny fiarany hidiran'i Mihary.
- " Tsara tarehy anie izany fiaranao izany ry Mahefa eh!" hoy i Mihary sady niditra izy.
- " Tinao?" hoy i Mahefa sady nitsiky tamin'ity tovovavy nambabo ny fony.
Niditra ny fiara haingana izy nony avy eo sady nibanjina kely an'i Mihary vao nanainga. Tsiky malefaka no nasetrin'i Mihary ilay topy maso tany aminy. Nangina tsy nisy niteny aloha izy roa nandritra iny lalana miholikolika mivoaka ny seranam-piaramanidin'i Charles De Gaules iny.
Tapa-kevitra ny hamaky ny fahanginana anefa i Mihary nony avy eo raha nahatsikaritra fa toa mihivingivin-doha izany i Mahefa eo ampitondrana ny fiara eo.
- " Mbola ao tsara ve ianao izany Mahefa?" hoy i Mihary somary nanatsafa azy
Tsy namaly aloha i Mahefa fa nitsiky kely fotsiny.
- " Mahavariana ny fiainana an!" hoy i Mahefa nony afaka segondra vitsy taty aoriana. " Zavatra tena tsy azo eritrerentina mihitsy no nampifanena ny lalantsika indray? ... Ary oviana tokoa ianao io no nody tany Dago?"
- " Vao haingana mihitsy kah" mbola tsy ampy herintaona akory, ary ianao angaha tsy mba mieritreritry ny hody amin'izay?
- " Nisy fotoana aho ry Mihary tena nieritreritry ny hody tanteraka tany mihitsy saingy tsy araky ny nieritreretako azy daholo ny fandehan-javatra tany dia naleoko nanapa-kevitra ny hijanona aty ihany. Hamangy matetika any no kasaiko hatao... Fa naninona tokoa aloha ianao no tsy heno tampoka intsony taorian'ireny fiarahantsika tany Etazonia ireny eh?"
- " Izaho tokoa moa izany no tsy heno tampoka ?" hoy i Mihary somary menamenatra. "... betsaka loatra ny zavatra nifamahofaho teo amin'ny fiainako tamin'ireny fotoana ireny ry Mahefa a, ny ankoatran'izay ohatran'ny tsapako hoe tia ahy ianao nefa ohatran'ny misy zavatra mbola nampiahotra anao izany dia naleoko mihitsy aloha niniana natsahatra ny fifandraisana taminao."
Tsy namaly avy hatrany i Mahefa fa nitsakotsako tsara ny zava-boalazan'ity farany. Tsapany ankehitriny fa vonona hitia an'ity tovovavy ity amin'izay ny fony rehefa fantany fa tsy misy an'i Vololona azony hantenaina intsony eo.
- " Mihary ah, " hoy i Mahefa " tsy diso mihitsy ny eritreritrao fa tena nisy zavatra mbola namatopatotra ahy tamin'ireny saingy efa nivaha tanteraka izany fatorana izany ankehitriny. Disoinao ve aho raha milaza aminao hoe tiako ho velomina hiredareda amin'izay ilay afom-pitiavanao izay mirehitra mitsilopilopy ato anatiko ato?"
Tampoka be tamin'i Mihary ity fangatahan'i Mahefa ity. Tsy noeritrerentiny mihitsy fa hihazakazaka be toy izany ny fivoaran'ity fihaonany tamin'i Mahefa ity. Tohina mafy anefa ny fony tamin'ny fahatsapany fa famboraham-pitiavana tsy misy holakolaka no miantefa any aminy. " Dia ho laviko ve " hoy izy tany antsainy tany. Ny hamono ny fitiavako an'i Hery no tena antodiako taty hoy ihany izy niteny anakampo kinanjo famohazana ny fitiavako efa natory ity no sendra ahy. Inona re no hataoko. " Raha mbola lasa fisainana teo izy no injay henony nanakatra moramora teo amin'ny tanany ny tanan'i Mahefa. Toa izay dindon'i Mahefa nanakaiky azy izay no nanampy azy haka ny fanapahan-keviny. Tsy nisalasala intsony ny anao vavy fa avy hatrany dia noraisiny sady notsenainy tamin'ny safosafo ny tanan'ity lehilahy toa mitady fitiavana mafy aminy.
- " Tsy afeniko koa ry Mahefa" hoy i Mihary nony avy eo " fa ohatran'ny nitselatra izany mihitsy ny foko raha vao nahita anao teo iny, te hamihina mafy anao izany aho fa tsy fantatro hoe inona no nahazo ahy. Raha tsy teo angamba i Alexia sy Hery dia asa izay niseho teo."
Heninka hafaliana tsy nisy ohatran'izany i Mahefa naheno ny zava-boalazan'i Mihary. Nanaiky ny hiaraka amiko indray i Mihary izany hoy izy tany antsainy tany.
- " Mahagaga ry Mihary izany fitondran'Andriamanitra izany. Isika izao tokoa ve no atao hoe nampihaonin'ny kisendrasendra sa ianao mihitsy no tena efa hoe anjarako?"
- " Asa tokoa re ry Mahefa fa dia tsy mampino izy ity fa dia tena zendana dia zendana koa aho... Hanaraka ahy hody any Dago izany ianao?"
Tsy namaly ny anao lahy fa tsiky feno fitiavana fotsiny no nasetriny ny hanihany nataon' i Mihary teo.
Tsy henon'i Hery sy Alexia mihitsy ny halaviran-dalana sy ny tabataba tao ivelany amin'ny fifamoivoizan'ny fiara maro be manao tohivakana mamakivaky ny tananan'i Paris. Ny varavaran'ny fiara fitanterana marary nivoha no nanaitra azy roa.
- " Tonga isika ry Hery a!" sady nitsangana teo amin'ny toerany izy namonjy nivoaka ny varavarana mba hanome lalana ireo mpiasan'ny hopitaly hiditra hanampy amin'ny famoahana an'i Hery hivoaka aty ivelany.
Afaka fotoana fohy,
Toa finaritra ery i Mahefa mandinika an'ireto zatovo mpifakatia. Nandalo niserana tao antsainy vetivety ny endriky Vololona teo ampahitana ity zanany vavy misomebiseby ery mikarakara izato olon-tiany.
- " Dia tena reniny navela mihitsy ity zanako vavy ity an" hoy izy tany antsainy tany. Tamin'izay indrindra anefa no nitopy tany amin'ny Mihary ny masony ary tsinjony fa mandinika azy fatratra ity tovovavy. "Izao aho vao mahatsapa fa vonona hitia anao tanteraka ry Mihary" hoy izy tany antsainy tany sady nanatona moramora an'i Mihary izy.
- " Ary ianao mandinindinika be ahy an?" hoy i Mahefa mody nanadroadro.
- " Mahatsiaro ny andro lasa fotsiny aho kah" hoy i Mihary ila tsy hahajery an'i Mahefa.
Nitsiky fotsiny i Mahefa saingy toa sadaikatra izy satria tsinjony tampoka fa mandinika azy ireo fatratra i Alexia sy Hery tsy dia lavitra teo.
- " Aleo aloha aho hiresaka kely amin'ny Hery handamina ny rahampitso" hoy izy mantsy an'i Mihary.
- " Rahampitso maraina izany no atao ny fandidiana an'ise ry Hery ka maka aina tsara aloha androany."
- " Vonona efa hatry ny ela mihitsy aho Profesora?" hoy ity tovolahy mandinika tsara ity rafozan-dahiny vaovao.
Tsy niandry izay fandaminana mety noheverin'i Mahefa anefa i Alexia fa avy hatrany izy dia nitsatsaingoka hoe:
- " Aleo izaho no hijanona aty amin'i Hery ry dada a, ndana ianao sy Dr Mihary mody dia itondray akanjo madio fotsiny aho rahampitso maraina hisoloako. .. d aza adino ny miantso an'i Neny milaza hoe tonga soa aty ry zareo."
Nibitaka aok'izany ny tany anatin'i Mahefa na dia niseho ho tony aza ny fihetsiny sy ny feony tety ivelany.
- " Tena te hijanona ianao? " hoy i Mahefa tamin-janany vavy...
- " Lasa ary aloha izahay " hoy izy nanohy rehefa avy eo " Aza dia resahinao be loatra io zanak'olona io ry Alexia fa mbola reraky ny dia anie izy eh"
- " Aza manahy ianao ry dada fa karakaraiko tsara mihitsy izy an. Zany moa Hery eh" sady nosafosafoin'i Alexia ny lohan'i Hery sy ny takolany.
Lasa nivoaka ny efitra i Mahefa sy Mihary rehefa afaka fotoana fohy ary dia izy roa irery sisa no tavela teo.
Naka seza i Alexia dia io izy namonjy teo andoham-pandrinan'ity malalany.
- " Hery an," hoy izy nony avy eo
- " Ahoana izay ry Alexia malalako" hoy i Hery velon-tsiky sady nahatsiarotsiaro ireny fitiavana be nizaran'izy roa tany Madagasikara ireny.
- " Tsy avelako miverina any Dago any intsony ianao!"
- " D ahoana ny ..."
- " Tsy misy an'izany fa tsy mahazo miverina any ianao fa mijanona eto akaiko eto foana amin'izay"
- " Hanaiky an'izany ve i dadanao?" hoy i Hery tsy te hanohitra ity vetsovetsompon'i Alexia.
- " Haiko foana ny miresaka aminy sady izy koa anie efa nisy fotoana namporisika ahy ny hanafatra anao eh?"
- " Izany ve?" hoy i Hery somary tsy nanampo ity zavatra henony. " Lehilahy tsotra sady tsara fanahy ohatranao ihany raha ny fahitako azy iny an. Nandova azy mihitsy ianao raha ny toetra, fa ny fihetsika angamba ianao no nanahaka ny reninao" sady nitsiky kely i Hery
- " I Dada aloha dia tena tsotra sady antra olona tsy misy ohatran'izany, mbola ho tantaraiko anao moa ny tantarany rehefa any aoriana any, fa hono hoy aho, toa hoe namanao hono i Dr Mihary iny?"
- " Ie, namana mpiara mianatra tany amin'ny kilasy famaranana izy ry Alexia. Namako akaiky mihitsy fa avy eo izy moa nandeha nanohy fianarana tany Etazonia dia tsy nifankahita intsony izahay raha tsy efa taty aoriana elabe indray. Tantara lava ny aminy fa aleo rehefa sitrana aho sady manampotoana malalaka isika miresaka azy sa ahoana?"
- " tsy maninona kah!" hoy i Alexia sady nampanantonony moramora teo amin'ny molotry i Hery ny molony.
Henony toy ny nisy tselatr'afo namakivaky ny tenany iray manontolo. Efa ela tokoa mantsy izay niandrandrany izay oroka avy amin'i Hery izay ka henony toa nisamboaravoara mihitsy ny vatany. Tsy naharitra i Hery naheno ny halefaky ny molotry ity olontiany sy ny fisefosefony ka dia navoakany moramora avy ao anaty lamba ny tanany sady novonjeny nofihininy ihany koa ny lamosin'ity malalany.
- " Alexia! Tiako be ianao." Hoy ny monomonon'i Hery sady nifanoroka tsy nisy hafihafy ireto mpifankatia ela tsy nifankahitana. Niha niakatra ny filana tao anatin'izy roa. Nosafosafoin'i Hery ny volo sy ny tarehy soa an'ity olon-tiany. Raha ny sitrapony dia noesoriny tanteraka avokoa ny fitafiana teny amin'i Alexia iray manontolo saingy tsy azony natao moa izany ka dia ny fibadabadana izay hataony amin'i Alexia rehefa sitrana izy no notohizany.
Raha mbola varimbariana teo i Hery dia indro ny tanan'i Alexia fa tamy nandray sady nisintona malefaka ny tanany hiditra tao anatin'ilay irika marakaraka teo amin'ny lobaka nanaovany.
- " Anao io " hoy i Alexia tamin'i Hery sady naveziveziny hanafosafo ny nonony mbola tsara fono tao anaty taty nono ny tanan'i Hery. Nanomboka tsapan'i Alexia ny tsiron'ny hasambarana. Toa tsy mino izy fa manafosafo ny tenany indray ny tanan'ilay olon-tiany.
- " Tsy nahita tory mihitsy aho tamin'ny alina fa nieritreritra izao fotoana hihaonantsika izao foana" hoy ihany izy tamin'i Hery sady mangalam-pijery ery amin'ny varavarana sao misy olona mitazana. " Natahotra be aho fa sao dia tsy ianao ilay fantatro taloha no ho hitako hay tsy niova mihitsy ianao " sady navelany nisisika moramora hanapotsipotsitra ny loha nonony ihany i Hery amin'io.
- " Sitrana haingana moa ianao eh!" sady nihantahanta ihany ny anao vavy. " Ho hitanao tsara mihitsy ny anaovako anao" hoy ihany Alexia nanohy sady niarina moramora izy nanamboatra ny lobaka teny aminy.
- " Aza mbola hidina aloha Alexia!" hoy i Hery " izaho mbola te..."
- " An, an, an!" hoy ity farany " Manjary mampijaly tena fotsiny eto isika fa aleo rehefa sitrana tsara ianao manaram-po tsara amin'ny vatako."
Tany antranon'i Mahefa tamin'io fotoana io...
# Posted by tadiompitiavana :: FIZARANA 8:: Hametraka hevitra (2) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)
- " Allo, Malala ihany ity, Manao ahoana!" hoy i Malala. Fantany avy hatrany fa i Mahefa no tao ambadik'ilay antso. Nifampanontany vaovao teo aloha izy roa. Tsy naharitra anefa i Mahefa nony avy eo ka nanontany an'i Malala.
- " Ohatran'ny hoe misy zavatra maika tena niantsonao ahy izany ry Malala sa ahoana?"
- "Izany mihitsy! Misy zavatra manitikitika ny saiko ry Mahefa a. Ianao ve tsy nahatsikaritra zavatra tamin'ny fotoana nifampiresahanao tamin'i Dr Mihary?"
- " Zavatra ohatran'ny ahoana ? " hoy i Mahefa somary taitra.
- " Tsy izany mantsy fa nandeha tany amin'ny hopitaly namangy an'i Hery izahay mivady androany dia sendra tao koa i Dr Mihary. Lasa nandinika tsy nahy azy izany aho ary tena ohatra'ny misy itovitovizany be dia be amin'ilay sarin'ilay tovovavy noresahinao tamiko taty aminareo iny endriny"
- " Izany ve ry Malala? Dia tena hitombona tokoa ve ny ahiahiko. Izaho koa mantsy somary taitra ihany raha vao nahita ny anarany tamin'ny fotoana nikarakarana ny taratasiny hakaty Frantsa. Nieritreritra indray anefa aho hoe mety ho anarana mitovy fotsiny ilay izy. Ity ianao milaza azy ho mitovitovy endrika amin'i Ramisarivo ity indray no tena mahalasa saina ahy. Mety ho izy tokoa ve? Efa ela ela ihany tokoa moa izay fotoana tsy nifandraisanay izay ka tsy dia namoha ny fitadiako loatra ny feony tamin'izahay niresaka."
- " Tsy sahy nanotany azy aho" hoy i Malala "fa dia naleoko aloha miresaka aminao, hay moa izany dia tena tsy mandiso ahy mihitsy ny eritreritro. Ahoana izany raha izy tokoa io ry Mahefa?"
- " Dia ahoana amin'ny ahoana moa no tinao ho tenenina?" hoy i Mahefa mody tsy nahazo ny fanontanian'i Malala nefa naka fotoana kely hieritrerentana.
- " Ndeha ataontsika hoe ilay olona niarahanao tany Etazonia ihany i Dr Mihary,.."
Nangina kely aloha i Mahefa nandritra ny segondra vitsy. Toa tsy nampoiziny loatra ity mety ho tranga-javatra iray ity.
- " ... tsy mbola hitako izay tokony hatao ry Malala fa aleo aloha ry zareo ho tonga dia ho hitako eo raha izy marina ilay olona na tsia, sa ahoana ny hevitrao?"
- " An, an, an. Ianao ihany kah. Tsy manan-kevitra haroso anao aho fa mba te hanontany fotsiny. ... Manao ahoana ny zanako vavy ao!" hoy i Malala niezaka namily ny resaka rehefa avy eo.
- " Efa tena tsindrin-daona mihitsy ny anao vavy ato. Asa na hanao ahoana ny fotoana hifankahitan'izy roa indray?" Nisaotra an'i Mahefa teo i Malala noho izao fanampiana lehibe ataony an'i Hery izao dia nofaranan'izy ireo ny antso.
Ny ampitso Alahady teny amin'i seranam-piaramanidina teny Ivato.
Indro i Hery natosika tamin'ny fandriana misy kodiarana namonjy ny efitra hiondranany.
- " Hatreto ihany izany ianareo mpanatitra no afaka miditra" hoy ilay tovolahy iray niandraikitra ny fisavana ny antontan-taratasy"
- " Eny ary!" hoy i Fano tamin'i Hery "fa dia mirary an'ialahy ho tody soamatsara any izahay sady ho tontosa ampahombiazana ihany koa ny fitsaboana, ary mba ho finaritra ihany koa ialahy mahita ny an'i Alexia"
- " Misaotra betsaka anareo roa tamin'ny fisahiranana rehetra " hoy i Hery. " Tsy ho adinoko izay vitanareo tamiko. Aza mbola atao mihitsy aloha ny raharahanareo roa raha tsy tonga aho an!" Tsy naharitra fa toran'i Hehy i Fano sy Tahiana ary i Mihary naheno ity zavatra nolazain'i Hery farany ity.
- " Aza matahotra ianao ry Hery fa miandry anao izahay an!" hoy i Tahiana mbola lokilokin'ny hehy sady nanao veloma azy roa hanainga tsy ho ela handao an'i Madagasikara.
Vao dify tsy hita maso tany ambadiky ny rindrina fitaratra tany i Hery sy Mihary dia indro i Fano sy Tahiana nivoaka ny seranana hamonjy ny fiarany niantsona tao ivelany. Nojeren'i Tahiana ny famantaran'ora teny antanany.
- " Hay efa amin'ny iraikambinifolo sasany alina izao!" hoy izy ohatran'ny somary taitra sady nangalam-pijery tany amin'i Fano.
- " Inona moa no mahamaika izato malalako?" hoy i Fano tsy naka sarotra. " Eto anilanao anie aho eh"
- " Marina tokoa izany" hoy i Tahiana. "Ohatran'ny tsy mahazatra ahy fotsiny ilay mandeha amin'ny andro alina be toy izao fa tsy hoe misy mahamaika kah." sady niditra tao anaty fiara izy roa.
Mangina be iny lalana miala ny seranam-piaramanidin'Ivato iny. Tsy misy mpandeha intsony eny amin'ny arabe fa fiara mahalana dia mahalana no nifanena tamin'izy roa. Samy tsy nahitana teny firy na i Fano na i Tahiana. Nony injay hiditra an'i Talatamaty, dia tsy naharitra intsony i Fano fa tapakevitra ny hanapaka ny fahanginana tao anaty fiara.
- " Inona ary no mampangingina anao izany ry Tahiana? Ohatran'ny lasa fisainana be izany anie ianao eh, Malahelo an'i Hery sy Mihary ve?"
Nitsiky kely fotsiny aloha i Tahiana sady nitodika tany amin'i Fano izay nangalam-pijery kely nijery azy fotsiny sady nifantoka tamin'ny lalana teo anoloany ihany.
- " inona no tinao ho eritreretiko" hoy i Tahiana somary ohatran'ny lokin'ny hehy kely.
- " ohatra hoe manonofinofy ianao hoe mandeha mijanona eo ampovoan'ilay tany malalaka be nototofana ery amin'ny digue ery isika izao alina izao d..."
- " Ianao ity koa ry Fano tena tssss.... tsy izaho amin'izao taonako izao intsony no mahavita zavatra ohatran'izany" hoy i Tahiana sady mbola lokilokin'ny hehy somary menatra ihany izy.
- " F'angaha mbola tsy arakao moa ry Fano fa efa betsaka anie ny nilaza ho voatsilon'ny jiron'ny mpitandro ny filaminana teo eh. Tsy maintsy namoaka ampaosy daholo hono vao navelan-dry zareo nandeha"
- " Izany ve?" hoy i Fano somary gaga. " Fa ahoana no nandrenesanao zavatra ohatran'izany?"
- " an, an, an, rehefa mba te hanalanala azy iny aho taloha dia mandeha mitsidika ilay forum natokana hoan'ny zatovo sy ny olon-dehibe ao amin'ny wanadoo.mg, dia tao no nahitako an'izany resaka izany."
- " Ary ianao izany anie maharaka zavatra mihitsy ry Tahiana eh."
Nony afaka minitra vitsy.
Nihananakaiky ilay toerana nolazain'i Fano ny fiaran'izy roa.
- " Etsy izany no tinao hijanonantsika" hoy i Tahiana
- " Ahoana sahy ve ianao? " hoy i Fano.
- " An, an, an. Tsy sahy aho fa toa mangina be loatra izy izany sady sao dia hietraketrahan'ny olon-dratsy eo fa ndao any antranonao ihany kah!"
Tsy namaly i Fano fa ny masony fotsiny no natopiny kely tany amin'i Tahiana ho mariky ny fanekeny ny fangatahan'ity farany. ...
Ny nanidian'i Fano ny varavaran'ny tranony no ela fa avy hatrany dia noraisiny teo amin'ny valahany i Tahiana sady nofihininy mafy. Nahankiny tamin'ny rindrina i Tahiana nony avy eo sady noezahiny notakarina nosafoina moramora avy any amin'ny lohaliny miakatra mamonjy ny feny. Somary taitra aloha ny anao vavy nefa toa tsy andriny ihany koa ny hahatsapany tanteraka ny tanan'i Fano any anatiny. Nakimpiny moramora ny masony sady naveziveziny tao andamosin'i Fano ny tanany anakiroa nitady irika ahafahany mampiditra ny tanany hanafosafo ny vatan'ity olon-tiany.
Raha mbola varimbariana teo i Tahiana dia tsy tratrany fa efa tafiditra tanteraka tao anatin'ilay silipo dantela manify nanaovany ny tanan'i Fano. Nisento tokana izy naheno azy. Toa tsy andriny ny hikasihan'ny tananan'ity lehilahy eo amin'ny molotry ny fivaviany. Injay fa henony nandalo teo amin'ny kitsom-pahafinaretany ny ratsan-tanan'i Fano. Poa toy izay dia nihenjana aok'izany ilay faritra matsokotsoko teo. Nihontsana daholo ny vatany iray manontolo tsy nahazaka ilay onjam-pahafinaretana tsapany. Satriny hiverina handalo eo indray ilay rantsan-tanana toe ary tsy hiala eo mihitsy raha tsy tonga any amin'ny tampom-pahasambarana ny tenany. Henony miha ampoka ranoka ny fivaviany. Hotsaka tanteraka ny tenany.
- " Fano ah! ampidiro any ny tananao!" hoy izy tamin'ny feo miangoty dia miangoty. Mbola tsy tapitra akory anefa ny teniny dia indro fa efa mivezivezy manafosafo ireo molotra efa malama hotsaky ny rano madity ny ratsantanan'i Fano ankavanana. Lafatra no nahatsapan'ny Tahiana ny fiainany. Tsy niteny intsony izy fa ny tarehan'i Fano indray no novonjeny notazonina mafy tamin'ny tanany roa sady norohany araka izay azony nataony. Henony fa miha godro ny lohaliny. Fantany fa tsy hahatsangana ela intsony izy raha mitohy izao fanafinaretana tsapany izao. Nitambotsitra ny anao vavy saingy novonjen'i Fano nampiakarina hainganana sady nahankiny mafimafy kokoa tamin'ny rindrina.
- " Ndao moa hoany ambony fandriana?" hoy i Tahiana niangavy mafy fa toa nodian'ity olontiany tsy nohenoina. Tampoka teo, nohaingain'i Fano tanteraka ny zipo lava teo anoloana teny amin'i Tahiana. Saika hiteny zavatra ny anao vavy fa avy hatrany dia notapenan'i Fano tamin'ny fanondrony ny molony tsy hisoka-bava. Tsy nanohitra intsony izy fa namela izay tian'i Fano hanaovana azy. Noesorin'i Fano moramora ilay silipo dantela fotsy izay vao maika tena nampiredareda ny filana tao anatiny ny fahitana azy. Nampidininy hatreo ampototry ny fen'i Tahiana fotsiny aloha dia indro izy efa eo ampandoalihina sahady mitohoka ilay dongona somary misy volo kely vao avy nolalaovin'ny tanany teo. Somary nikisinkisina kely i Tahiana hanalany tanteraka ilay silipo niantona teo amin'ny lohaliny ary dia nisabaka kely izy nony avy eo sady niankina tsara tamin'ny rindrina. Natompiny tany amin'ny valin-drihana ny masony sady nakimpiny moramora nony avy eo handraisany izay fahafinaretana omen'i Fano azy. Tsy aritry i Fano intsony fa dia tiany ho rakotry ny molony avokoa ny molotry ny fivavian'ity Tahiana ka dia nampiakariny teo ambonin'ny valahan'i Tahiana ny tanany anakiroa ahafahany misintona tsara ny vatan'ity farany hanakaiky azy be be kokoa. Lafatra ny fahatsapan'i Fano ny tenany. Injay fa henony toa misy tsiranoka kely mivoaka ny filahiany izay efa nibontsina hatramin'ny segondra voalohany nidirany ny varavaran'ny tranony. Nahatsiaro saina kely ny anao lahy nony avy eo. Najanony tampoka ny zavatra nataony. Nitsangana izy dia noraisiny ny tanan'i Tahiana sady ohatran'ny notaritaritiny izany ny zanak'olona hoany anefitra fatoriana. Mbola saika ndeha hiondrika haka ilay silipony tavela teo amin'ny tany anefa i Tahiana saingy tsy afaka intsony noho ilay sintona romodromotry ny filana nataon'i Fano azy.
Ny nidirana ny efitra fatoriana sy ny nampirehetany ny jiro zara fa nanazava ny ny tao anatiny no ela dia indro i Fano nanala tsimoramora ny lobaka teny amin'i Tahiana sady toa misefosefo be ihany. Tsy niteny i Tahiana. Nahitany fahafinaretana ny mandinika ity sakaizany mila azy fatratra. Nifanojo matetika ny mason'izy roa saingy tsy nisy niloa-bava. Ny lobaka sy ny zipo lava ihany no noesorin'i Fano fa ny tati-nono sy ny kiraro avo vodi-tongotra navelany nanaovan'i Tahiana ihany. Saika ndeha hanala ireo i Tahiana no nosakanan'i Fano.
- " Aza mbola esorina aloha" hoy izy. Tsy nanda ny anao vavy fa niezaka namaha ny bokotry ny lobaka teny amin'ilay olontiany.
Mailaka dia mailaka no nanalan'i Fano ny ankanjo teny aminy rehefa avy ary dia indro fa nirangaranga toy ny basy antifi-kavana ilay filahiany izay nahatsiaro afa-patorana tao anaty silipo sy pataloha. Nidoboka kely ny fon'i Tahiana ary toa henony nisy tsela-baratra izany namakivaky ny tenany iray manontolo nahita ity filahiana miridiridy be teo anoloany. Nampanantonony akaikikaiky an'i Fano ny faritry ny foitrany dia somary nakasokasony kely teo amin'ny tampon'ny fivaviany ilay lohany nisy rano kely tanteram-pahazavana iny. Nojereny tsara ny akon'ny zavatra ataony teny amin'ny endrik'i Fano. Tsinjony fa naka tsirony ny anao lahy sady nanankipy moramora ny masony. Raha mbola varimbariana iny i Fano no nidina nitingitingina tampoka i Tahiana miaraka amin'izato kiraro avo vodi-tongotra eny aminy. Nobedainy moramora tamin'ny tanany ankavia ny ireo vaonin'ny filahian'i Fano ary dia natsofony moramora tao ambavany ny lohan'ilay filahiana sady narahiny tsetsitra tamin'ny molony rehefa avy eo. Nikiakam-pahafinaretana ny anao lahy.
- " Ahhhhhhhhhhhhh! Hoy ny fisenton'i Fano toa tsy nanampo izato fahasahian'ity olon-tiany nandrombaka ny fitarihana izay hataon'izy ireo. Navezivezin'i Tahiana teo ny molony sady navoakany koa ny lelany hanafosafo ny halavan'ilay filahiana toa nitombo hadiry tsy nisy ohatran'izany. Somary ningainy kely ilay izy nony avy eo dia io izy nanakatra ireo vaoniny roa tao ambany tamin'ny molony sy ny lelany. Ohatran'ny ho afaka izany ny fahatsapan'i Fano ny ainy. Nifandimbiasan'i Tahiana noteriterena tamin'ny molony roa ireo vaoniny roa ireo. Ny tanany ankavanana amin'io manafosafo hatran'ny ny lavan'ny filahian'i Fano izay nanomboka efa niha nalamalama ny tsiranoka nivoaka teo amin'ny lohany.
- " Miakara etsy ambony fandriana amin'izay" hoy i Tahiana nony avy eo sady nosintoniny tamin'ny filahiany i Fano hanantona ilay fandriana mirakotra lamba fotsy malefaka izay tsy lavitra teo. Tsy namaly mihitsy i Fano fa nanaiky tanteraka izay nampanaovina azy. Tsy araka ny niheritreretany azy ny zava-nitranga saingy tiany ihany koa ny mba mamela ity olon-tiany hanao izay tiany hatao aminy.
- " Mandoaliha" hoy izy tamin'i Fano " sady nasainy niamboho azy ity lehilahy.
- " Sokafy tsara ny fe!" hoy ihany i Tahiana vonona ny hanatateraka ny nofinofiny tao antsainy tao izay elabe izay tamin'ity olon-tiany. Nangorintsina tanteraka ny tenan'i Tahiana nanoloana ny zavatra hitany. Vao maika nampitombo ny fientanana tao anatiny ny fahatsapany fa nanaiky ny hanatanteraka izay ampanaoviny azy rehetra i Fano. Nandroso moramora teo antongom-pandriana izy dia noraisiny moramora ny filahian'i Fano izay mijaridina tsara manaraka ny halavan'ny kibony. Niverenany notohofany tamin'ny molony indray irey vaoniny anakiroa nikiraviravy taty aoriana. Somary niontana kely i Fano fa tsy nahoany. Vao maika aza nobedainy mafimafy kokoa ilay zavatra teo antanany. Nampiakariny moramora teo amin'ilay vaky manasaraka ny ravi-maojan'i Fano ny lelany. Henon'i Fano somary nangitikitika ka nitroatra kely ny tenany. Tsy tratra anefa fa efa indro mamihina ny valahan'i Fano ny tanan'i Tahiana ankavanana. Nampandaloviny teo amin'ilay lavaka tsy lavitra teo amin'izay ny molony. Nisento sady nanomboka nisefosefo be ny anao lahy. Navezivezin'i Tahiana teo ihany aloha ny molony. Nony tsapany fa nihazatra ilay tsirom-pahafinaretana tsapany i Fano dia natohany moramora teo amin'ilay lavaka tamin'izany ny ratsan-tanany iray. Injay fa henon'i Tahiana fa nihetsika moramora ny maojan'ity malalany. Noezahany nampidirina moramora tany ny tanany. Natsofony kely dia avoakany. Afaka segondra vitsy taty aoriana, nasain'i Tahiana nivadika amin'izay i Fano. Toa ireny olona mamon'ny toaka mena maso sady manganohano ireny no nahitan'i Tahiana ny endriny. "Hitako tsara izany ny anaovana anao amin'ny manaraka" hoy i Tahiana tany antsainy tany. Raha mbola miandradra fatratra izay tian'i Tahiana atao teo i Fano no indro ny anao vavy namonjy nikisaka tamin'ny lohaliny sady nisabaka teo ambony sady nandray tamin'ny tanany ny filahian'i Fano ary nampiditra azy tao amin'n'y zohim-pahafinaretany. Niara nihiakam-pahasambarana izy roa raha vao samy nahatsapa ny tenany nifampikasoka tanteraka tany anatiny tany. Nanomboka nikimpy moramora amin'izay i Tahiana sady nanetsiketsika ny valahany hamiliany ny filahian'i Fano any amin'ny toerana izay tena hahenoiny ny fafiny indrindra. Somary niharina kely haingana i Fano hanongotra ilay tatinono mbola tavela teny antratran'i Tahiana saingy tsy afaka. Sady nanovokovoka ihany i Tahiana no niezaka namaha tamin'ny tanany avy any aoriana ilay tatinono hanome fahafinaretana ity malalany. Toa nitselaram-baratra indray tany andohan'i Fano tany vao nahita ireo nono be anakiroa mirongaronga sady miraviravy teo antratran'i Tahiana. Novonjeny nosamborina haingana tamin'ny tanany anakiroa mba tsy hiontsankotsana hanaraka ny onjan'ny fihetsehan'i valahan'i Tahiana izay nihamafy hatrany. Noesorin'i Tahiana anefa ny tanany dia nahankiny tamin'ny fandriana hivelatra amin'ny andaniny roa toa ireny namatsihana ny olona fahizay tamin'ny hazo fijaliana ireny. Tsy nahahetsika intsony ny anao lahy fa sady voabeda tamin'ny tanany anakiroa no voatsindry tsara teo ampovoany teo amin'ny filahiany. Hany heriny dia nanaiky izay tian'i Tahiana itondrana azy teo. Naka toerana tsara i Tahiana sady tena niezaka nampiditra ny filahian'i Fano tany anatiny araka izay azony natao. Notohizany indray ilay fitakisinkisinana teo sady somary nahodin-kodiny kely ohatran''ireny manaroharo dite ao anaty kaopy ireny ny valahany. Vaovao amin'i Fano ity Tahiana manaram-po amin'ny vatany ity saingy ohatran'ny mitondra fahafinaretana be tsy misy ohatran'izany ho azy ihany koa. Raha mbola varimbariana mianoka ny fahasambaran'ny nofony teo i Fano no injay henony fa nihananindry mafy dia mafy ny fivaviany teo aminy i Tahiana sady nanodin-kodina fatratra toa ireny olona tsy tompon'ny tenany ireny intsony. Fantany avy hatrany fa efa manakaiky ilay varavarana mitondra any amin'ny faratampom-pahasambarana i Tahiana. Tsy ela taorian'izay:
- " Fano aaaaaaaaa! Alefaso miaraka fa tiako be annnnnnn!" Ohatran'ireny olona hetsehin'ny tromba ireny no fahitan'i Fano an' i Tahiana. Tsy tantiny ny nijery ny tarehiny fa tena heniky ny fahasambarana tanteraka ny tenan'ity vehivavy. Niova ho nalefaka sady toa miramirana izany ny fahitan'i Fano an' Tahiana. Nahatsiaro sambatra koa izy ary injay fa henony mibosesika te hivoaka avy any anatiny avy any ny tsirinainy. Tsy niezaka nitana intsony i Fano fa dia navelany hanaram-po ny vatany. Tretrika loatra ny fahatsapany ny tenany iray manontolo. Henon'i Tahiana tsara ny fantsitsitra voalohany tany anatiny tany ka vao maika namovokovoka izy hanome fahafinaretana araka izay azony atao ity malalany.
Afaka fotoana fohy. Samy nanokatra ny masony izy roa. Nifampitsiky kely aloha vao nanantona ny molotr'i Fano moramora ny molotr'i Tahiana.
- " Tiako be ianao ry Fano" hoy izy. " Ianao tena mahay manao be mihitsy an"
Tsy namaly aloha i Fano fa tsiky fotsiny koa no navaliny an'izay fiderana kely azy izay.
- " Ary ianao kah!" hoy izy nony avy eo." Taiza no niaranaranao an'ireny teo ireny?"
- " Tinao sa tsy tinao aloha e?" hoy i Tahiana somary miangoty teo antratran'i Fano.
- " Tiako be mihitsy fa tsy nampoiziko. Menatra kely aloha aho tamin'ny voalohany ... fa nilamina ihany aho nony avy eo." Sady somary toran'ny hehy kely izy.
- " Hitako hoe tinao koa ilay izy" hoy i Tahiana. Resakay samy vehivavy mifanakalo traikefa no nahaizako azy. Efa ela mihitsy no tiako handramana taminao fa androany aho vao sahy, Hnnn,hnnn" .
Niresaka kely vetivety teo izy roa sady nifoha nandeha nidio maimaika. Sendra nitopy tany amin'ilay famataran'ora elektronika nihantona tamin'ny rindrina i Tahiana raha izy hiverina ho eo ambony fandriana iny:
- " Oay! Efa amin'ny roa maraina sahady fa ndao hatory amin'izay." Sady nitsofoka tao anatin'ilay lamba fotsy nandrakotra ny fandriana izy no namonjy niondana kely teo antratran'i Fano.
Efa tsy andrin'i Hery mihitsy ny ahatongavan'ny andro alahady hiondranany any Frantsa hanaovana ny fandidiana azy ary indrindra indrindra moa ny hahitany ilay malalany. Raha iny izy mbola variana naka sary antsaina ny mety ho fizotran'ny fihaonany indray amin'i Alexia iny indrindra no indro niditra ny varavarana i Haja.
- " Ah! i Haja marina!" hoy i Hery nitsiky nahita ity zakaizany fahazaza nanatona sady naka seza hipetraka teo akaikin'ny fandriana nisy azy.
- " Fa taiza foana letsy ialahy no izao vao nipoitra nefa izaho efa firy andro izay no taty?" hoy i Hery somary nanadroadro.
- " Miala tsiny be dia be leitsy ry Hery fa vao io maraina io mihitsy anie aho no tonga avy namita iraka tany amin'ny faritany e. Natsipiko tao antrano fotsiny ny entako, dia nandalo kely tany ampiasanantsika aho, dia izao tonga aty amin'ialahy izao. Fa inona marina no nahazo an'ialahy ity?" hoy i Haja liana fatratra hahalala izay tena zava-niseho nahatonga an' i Hery any amin'ny hopitaly izao.
- " Saika vita lesy aho raha ny tena marina fa mbola fitahian' Andriamanitra kely fotsiny ah!" hoy i Hery nanomboka nitantara ny fitrangan'ny loza nahazo azy...
- " Gravy letsy izany!" hoy i Haja tsy naharitra. " Mbola tsy anjaran'ialahy marina ny ho faty fa raha izany fitantaran'ialahy azy izany anie ka tena ialahy mihitsy no nitsian'ny lohan'ilay fiara eh! Hnnnn"
- " Tsy te hieritreritra an'izay intsony letsy aho aloha izao ry Haja" hoy i Hery nony avy eo "izay hahasitrana ahy sy ny ihaonako amin'i Alexia izao no amenoako ny saina aman'eritreritro."
- " Marina aloha ny an'ialahy ry Hery fa miala tsiny aho ohatran'ny be fanontaniana ny momba iny zava-nitranga iny."
- " Ka manao ahoana letsy tany amin'ny nalehan'ialahy tany, ny ao ampiasana?" hoy i Hery nanohy rehefa avy eo sady namadika ny zavatra noresahin'izy mirahalahy.
- " Nahafinaritra ny tany fa valaka koa aho vao vita ny asa natao tany an! Ny ao ampiasana indray letsy milamina fa efa nifampizaran-dry zareo vonjy maika ao aloha hono ny asan'ialahy mandra-pa."
- " Efa henoko izay vaovao izay" hoy i Hery namaly moramora " efa niantso ahy teo mantsy ingahy tale nanotany ny toe-pahasalamako. ...Nolazaiko azy koa moa fa handeha hodidina any Frantsa aho. Efa fantany izany hoe tsy voafetra ny fotoana hijanonanoko any. "
- " Rahoviana ialahy no handeha?" hoy i Haja ohatran'ny tsy dia nanampo loatra fanazavan'i Hery teo.
- " Rahampitso Alahady letsy!"
- " Tena saika tsy nahita an'ialahy aho hay izany raha mbola be kenona tany ampandehanana tany! Efa fantatry Alexia ve izao zavatra mahazo an'ialahy izao? "
- " Ie!, Ka izy sy ny dadany any Frantsa mihitsy anie no nanolon-tena hisahana ny fikarakarana sy ny fitsaboana ahy e.
- " Fa mbola any angaha i Ratrema amin'zao?"
- " An, an, an efa aty izy kah, fa inona no mahatonga an'ialahy manontany an'izany?"
- " ka iza izany dadan'i Alexia lazain'ialahy izany?"
- " Hay tokoa moa ..." hoy i Hery nahazo ny antony mampametra-panontaniana ity sakaizany. Nofitimpitinin'i Hery maimaika teo ny tantara momba an'i Alexia sy Mahefa.
- " Mba dadany indray letsy izany fandehan'izy izany. Ohatran'ny tsy mampino! Mirary ny fitsaboana an'ialahy ho tontosa soamatsara izany leitsy, dia mirary anareo roa ho tojo amin'izay iriana ihany koa. Lazao manokana mihitsy i Alexia rehefa tonga any ialahy hoe veloma hono hoe hoy i Haja fa sao dia adinon'ialahy an."
- " Misaotra leitsy Haja sady mbola misaotra an'ialahy ihany aho nampihaona anay fa tena tsapako mihitsy ankehitriny fa izy no anjarako."
- " Inona moa lesy no isaoran'ialahy ahy amin'izany fa efa natao hiaraka koa angamba ianareo roa eh.
Raha mbola niresadresaka teo izy roalahy no indro nipoitra teo ambaravarana ingahy Ratrema mivady. Vao nahita ireto mpamangy i Haja dia nitsangana tamin'ny seza nipetrahany sady nangata-dalana tamin'i Hery.
- " Ary ohatran'ny hoe izahay no mandroaka anao raha izany" hoy i Ratrema somary nisangisangy tamin'i Haja.
- " An, an, an. Tsy izany mihitsy ry ingahy Ratrema fa efa tena vonona ny handeha mihitsy aho io" sady nandray tanana azy roa izy no nandeha namonjy ny varavarana hivoaka tany andalan-tsara.
Toa nahatsiaro finaritra izany i Hery nahita an'i Malala sy ingahy Ratrema tonga namangy azy indray. Miramirana velon-tsiky koa moa ny mpamangy ka hita fa toa adinon'ny roa tonta ireny disadisa nila hampisara-bazana azy ireo teo aloha ireny.
- " Efa vonona ny handeha izany ise izao ry Hery?" hoy i Ratrema nitari-dresaka rehefa avy eo.
- " Efa vonona mihitsy aho ary tsy andriko aza koa. Ny hahita an'i Alexia no tena mahamaika ahy noho ny tena antodiako any " hoy i Hery somary nitsiky.
- " Tsy manome tsiny an'ise aho kah!" hoy i Ratrema namaly tamim-pitsikiana ihany koa " Fa na izany na tsy izany aloha ny fahasalaman'ise no tokony karakaraina mialoha ny zava-drehetra"
- " Marina mihitsy ny teninao " hoy i Hery tsy naka sarotra.
- "Ireto r'ise mba misy zavatra kely hoentina hoan'i Alexia sy Profesora Mahefa" hoy ihany Ratrema nony avy eo. " Mba azon'ise omena an'i Dr Mihary ve? Ary eo ihany ve moa izy izay?"
- " Vao haingana teo mihitsy izy no lasa niverina any amin'ny biraony any haka zavatra vetivety hono" hoy i Hery. Tsy ela taorian'izay anefa dia indro niditra i Mihary.
- " Ah!, misy mpamangy ny havako marina!" hoy izy sady nitompy tany amin'i Malala sy Ratrema ny masony sady nitsiky nandray tanana azy ireo. Somary taitra kely i Malala tao anatin'ny segondra vitsy raha iny nifanojo iny indrindra ny masony sy ny an'i Mihary. Toa efa nisy toerana nahitako an'ity Mihary ity hoy izy tany antsainy tany fa izao aho vao tena mahita tsara ny endriny. Namadibadika ny fitadidiany teo anefa i Malala saingy tsy nety nitamberina tao antsainy mihitsy ny zavatra tiany ho tadidiana. Hany heriny dia niverina nangilan-tsofina tamin'izay resaka nifankalozan'izy telo mianaka teo akaikiny teo.
- " Mety tsy ho afaka ny hanatitra anareo eny Ivato izahay hoy Ratrema rahampitso fa tena alina loatra ny fiaingan'ny zotra handehananareo ka izay no nandalovanay aty androany. Dia mirary an'ise mba ho sitrana soamatsara dia mba ho finaritra hifakahita indray amin'ny olontian'ise. Ianao koa moa dokotera hanatitra azy any?" hoy ihany i Ratrema.
- " Izaho no hanaraka azy any sao misy zavatra mitranga tampoka eny andalana" hoy i Mihary.
- " Dia misaotra anao be dia be dokotera fa vitsy ny mahavita ny toa izao ataonao izao."
I Malala mandritra izay fotoana izay mangalam-pijery mandinika tsara an'i Mihary ihany izay hita fa mifantoka tsara amin'ny resaka nataon'i Ratrema.
- " Efa nisy fotoana nahitako an'ity Mihary ity mihitsy eh." Hoy ihany i Malala miketriketrika samy irery tany antsainy tany. " Taiza re?..."
Rehefa ela nivadibadihana teo ny sain'i Malala dia nitamberina tampoka tao antsainy ny zavatra notadiaviny. "Tena izy mihitsy ity " hoy ihany izy niteny anakampo.
Ny nivoahan'izy roa tao amin'i Hery sy Mihary no ela dia indro i Malala fa nikarokaroka ny boky kely fitehirizany ny laharan'ny fidain'ireo olom-pantany.
- " ndry! Ary iza ity olona hantsoinao maika be tampoka be toa io" hoy i Ratrema mantsy ity vadiny.
- " Misy zavatra tiako anontaniana an'i Mahefa maika dia maika Ratrema!" sady ohatran'ny sorisorena izany i Malala namaly ity vadiny.
Tsy afaka niresaka tamin'i Mahefa anefa izy fa tonga dia namantana avy hatrany tany amin'ilay fametrahana hafatra ny antsony.
- " Mahefa a, mba antsoy anie aho raha vao voarainao ity hafatro ity fa misy zavatra tiako resahina anao maika!" hoy i Malala dia notapahany ny antso
Afaka adiny iray taorinan'io tao amin'ny biraon'ingahy Ramanana teny Tanjombato.
- " Izy no Malala, vadiko" hoy ingahy Ratrema tamin' ingahy Ramanana sy ireo zanany roalahy efa niandry tao amin'ilay birao midadasika sady feno fanaka mihaja mampiseho taratra ny farim-piainana ireto olona nandray azy mivady.
- " Faly mahalala anao Madame Malala" Hoy i Ramanana sady namonjy nitsangana nanatona teo akaikiny koa ny zanany roalahy izay nipetraka teo amin'ireo seza lava vita amin'ny hoditra miloko volon-tany antitra tsy dia lavitra teo.
- " Patrick," no anarako hoy ilay voalohany sady nandray tanana an' Malala izy toa zara raha nitsiky.
- " Christian" hoy ilay tovolahy faharoa . Faly mahafantatra anareo tompoko" hoy i Malala namaly sady somary nitsiky.
- " Mandroso ianareo mivady" hoy ingahy Ramanana sady namonjy naka toerana teo amin'ny seza afovoany tsy dia lavitra ireto zanany izy.
- "Tsy maintsy nanasa azy mirahalahy zanako aho " hoy ihany izy nanohy avy eo raha vantany vao tafapetraka ingahy Ratrema mivady. " izy ireto mantsy no tena mitantana ny orinasanay rehetra ankehitriny fa izaho dia naman'ny hoe manara maso sy manoro hevitra amin'ny ankapobeny ihany raha ny tena marina" Efa nampitaiko tamin'izy mirahalahy ilay soson-kevitrareo mivady ary efa nodinihinay tsara" sady somary nihato kely ingahy Ramanana toa miezaka mafy mifantina ny vohambolana hampiasainy. "Rehefa tena nandinika izahay ry izy mivady" hoy ihany izy nanohy indray ny teniny " dia mety tsy hety aminay ity sehatra iasanareo ity, ankoatran'izay, efa tafiditra ao anatin'ny kizo ny orinasa ankehitriny amin'ny fotoana hanasanareo anay hampiasa vola ao aminy, ka ohatran'ny sarotsarotra ihany ny hanarina azy."
Tankina tsy nisy nahateny aloha ingahy Ratrema mivady tanatin'ny segondra vitsy. Na dia te hiherika tany amin'i Malala hizara ny hakiviany aza i Ratrema dia toa tsy nahahetsika tamin'ny toerany teo izy. Somary nanantena ihany mantsy izy fa hahaomby iny hevitra hitany iny saingy izao fandavana mazava izao no azony. Nikaroka izay teny heveriny fa mety tokony hampiova hevitra an'ingahy Ramanana mianankavy izy saingy toa nihodina tamin'ny ny tany aman-danitra ka tsy hitany izay ho lazaina.
- " Dia tena tsy misy hevitra mihitsy ve izany tompoko?" hoy i Malala nandray fitenenana haingana rehefa tsinjony fa toa tsy nahaloa peo ity vadiny.
- " Mba itadiavo hevitra any izay azonareo hanampiana anay re ry izy mianankavy fa tena tafiditra amin'ny lalina mihitsy izahay." Efa ho vita ny tenin'i Malala izay vao nahitana teny ingahy Ratrema:
- " Eny tokoa hoy aho, sao dia mba misy hevitra hafa afahantsika miara miasa re ?" hoy izy nanohy ny fiangaviana nataom-badiny teo.
Asa izay zavatra niseho teo fa nandray fitenenana tampoka ilay lahimatoan'ingahy Ramanana.
- " ...Aleo ary fa hifampiresaka indray mandeha izahay dia hampitainay aminareo rahampitso ny valiny" hoy izy .
Somary gaga ingahy Ratrema amin'izao fiovan-kevitra tampoka izao nefa faly ihany koa izy fa mbola mety hisy irika kely ihany izany ny haneken'ireto olona ireto ny fanampiana azy. Nisaotsaotra teo ingahy Ratrema dia nangata-dalana izy mivady ny handeha. Teo ampifandraisan-tanana hanao veloma no indro tsinjon'i Malala fa toa mibanjina azy fatratra ilay lahimatoa. Mody tsy taitra loatra anefa ny anao vavy fa ny tanan'ingahy Ramanana teo anoloany no noraisiny natao veloma haingana sady nampiany kely hoe :
- " Miandry anareo re izany izahay tompoko rahampitso, ary dia misaotra mialoha na inona na inona fanapahan-kevitrareo."
- " Tsy misy fisaorana Madama" hoy ingahy Ramanana namaly " fa aleo aho aloha hifampidinika kely amin-dry zalahy ireto dia ho hampitaiko aminareo eo izany ny tohiny."
Nony tao antokontany...
- " Tena kivy aho ry Malala fa dia ho lasan'ireto olona ireto ve izany io tranontsika io?" hoy i Ratrema kivy amboniny ihany taorinan'ilay fihaonana teo.
- " Aza mbola manary toky izany aky aloha Cheri ah!" hoy i Malala niezaka nankahery ity vadiny. " Aleo aho no hiresaka amin-dry zareo raha ohatra ka tena tsy manana hery handresen-dahatra an'ireo intsony ialahy!"
- " Ohatran'ny tsy dia tena mahavelom-panantenana ahy mihitsy ny fandehan'izy teo iny e Kah." Hoy ihany Ratrema... " Fa inona ary no nahatonga an'ilay zanany lahy iny niova hevitra tampoka teo? I Nedala mihitsy angamba no tena mitantana azy ity matoa tena tsy nisy nanohitra mihitsy izy mianaka, sa ahoana ny fahitanao azy teo iny" hoy ihany Ratrema nanontany an'i Malala.
- " Mety ho izay tokoa aloha . Iny Patrick iny izany no tena mila resena lahatra tsara. Somary masiaka fijery izy raha ny fahitako azy teo." Hoy i Malala.
Tany Paris tamin'io fotoana io,...
- " Tojo a, tsy andriko mihitsy ny hahatongavan'ny Alatsinainy " hoy i Alexia nientanentana ery nivoaka ilay toeram-pilalaovana sarimihetsika.
- " Fa misy inona moa amin'io Alatsinainy io ry Alexia?" hoy i Tojo mody niseho tsy nahalala ny antony mampientanentana ity tovovavy.
- " Enao ity koa tsss! Modinao fanina eo indray. Fa efa hoe amin'ny Alatsinainy hoy aho no ho tonga i Hery !" sady somary nodominy kely moramora teo amin'ny soroky i Tojo ankavia.
Samy tsy nisy niteny aloha izy roa nandritra ny segondra vitsy izay vao namaly i Tojo niteny hoe:
- " Mety androany izany no fotoana hijerentsika sarimihetsika samy irery farany eh?"
- " Fa maninona no androany no farany?" hoy i Alexia tsy nahatakatra ny tian'ity Tojo ho lazaina.
- " Rehefa tonga tsinona i Hery ka sitrana soamantsara dia mety ho hadinonao tanteraka mihitsy ny fisiako fa izy indray no hameno ny fiainanao"
Tsy nampoizin'i Alexia ny zava-boalazan'i Tojo. F'angaha moa hoy izy tany antsainy tsy efa mazava ny fifandraisako amin'i Tojo no mbola milaza zavatra ohatran'izany amiko izy.
- " Tojo a!," hoy i Alexia nanohy ny resaka rehefa avy eo. " Izaho sy ianao anie efa niresaka tsara indray mandeha izay raha tadidinao eh? Nilaza ny hanamboatra saina ianao sady handray ahy ho toy ny namana akaiky indrindra anao dia tiako raha mba hajainao izay teninao izay sa ahoana?"
- " Eny eh! Marina ny anao ry Alexia fa ny foko fotsiny no adala a. Aleo fa hiezaka aho " hoy i Tojo nangasihasy sady namoha ny varavaran'ny fiara hidiran'i Alexia.
Tany an-tranon'i Mahefa ...
- " Mba inona loatra ary izany zavatra tena ilan'i Malala ny hiantsoako azy maika izany?"
- " Allo! Malala?"
# Posted by tadiompitiavana :: FIZARANA 7:: Hametraka hevitra (3) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)